Ichekwa ndu ohia n'uzo nwere mmasi nye obodo Afrika
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Ichekwa ndu ohia n'uzo nwere mmasi nye obodo Afrika
omenala • News • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Na Ngorongoro dị na Tanzania, ndị obodo na-erite uru ozugbo site na uru ndị njem nwetara site na ihe karịrị ndị njem nleta 600,000 na-eleta ogige ahụ kwa afọ. Na mmekorita, anumanu na obodo na-ebikọ n'udo ebe anabataghi ịchụ nta. Nke a bụ ọnọdụ mmeri mmeri na-akwalite njem nleta na-adịgide adịgide yana ibi ndụ ndị mmadụ.
A gụrụ ya dị ka magnet kachasị mma na Tanzania na Africa, Ngorongoro Conservation Area (NCA) dị na mgbago ugwu Tanzania bụ ezigbo atụ nke nchekwa anụ ọhịa - ebe dị n'ime ụwa ebe ụmụ anụmanụ na ụmụ mmadụ bi n'udo, na -ekọrịta ebe ịta nri na akụ ndị ọzọ. dị n'ime ebe nchekwa.
Ga leta ndị Ebe nchekwa Ngorongoro na ndagwurugwu ya a ma ama nwere ike ibu ncheta nke ndu mmadu nke mmadu si n’akuku ozo nke uwa ga enwe ekele maka ihe di ebube nke okike.
Achọpụghị anụ ọhịa maka azụmahịa ma ọ bụ azụmahịa maka azụmahịa na Ngorongoro, na-ewere eziokwu na ndị obodo na-erite uru site na uru ndị njem na-enweta site na ndị njem 600,000 na-eleta ogige kwa afọ.
N’ịgwa ọnọdụ ndụ n’ime anụ ọhịa ma mmadụ n’ime Ngorongoro Conservation Area, onye isi ọrụ nchekwa Mazị Elibariki Bajuta kwuru na ichekwa ihe dị iche iche na ọdịbendị ọdịnala bụ ebum n’uche iji kwalite njegharị ndị njem na ibi ndụ ndị mmadụ.
Mpaghara Ngorongoro Conservation dị na mpaghara njem njem ugwu nke Tanzania, na-adọta ndị njem nleta na ndị njem nleta ndị ọzọ sitere n'akụkụ ụwa niile ịga leta akụkụ a nke Africa maka anụ ọhịa anụ ọhịa.
Ndi oru Ngorongoro Conservation Area ka enyere ha ka ha chekwa ma chekwaa ihe nile ekere uwa na omenaala ebe enyere ya. Ichekwa na nchedo oke ohia na-achikota ya na inye ndi oru nke ndi obodo Maasai ndi mmadu na ala ha.
Afọ iri isii na otu kamgbe e hiwere ya, Ngorongoro na-agba mbọ ibi ndụ e kenyere ya, nke mere ka Nationstù Mmụta, Sayensị na Ọdịbendị nke Mba Ndị Dị n'Otu (UNESCO) kwuwapụta na Ebe nchekwa dị ka ebe nchekwa mmadụ na Biosphere.
E mepụtara ụlọ obibi asaa ndị Maasai ndị a maara dị ka bomas omenala maka ọrụ ndị njem na-eme na omenala n'ime mpaghara nchekwa iji nye ndị njem nleta na-eleta mpaghara ahụ ọrụ ọdịbendị. Ndị a gụnyere ọla na ọla aka emere na mpaghara nke ekpughere ma ree ndị njem nleta dị ka ihe ncheta.
Ndị njem nleta na-eleta ebe obibi ndị a na-akwụ nnukwu ego dị ka ego iji hụ na ọdịbendị Maasai, na-enye aka na ndị obodo.
Ugbu a, ndị obodo Maasai na-ele anya na njem nlegharị anya dị ka ihe ọzọ ha na-akpata na-akpata ego iji kwado ndụ ha kwa ụbọchị na-adabere na ngụkọta anụ ụlọ.
Ndị Ngorongoro Conservation Authority management kwenyere na ezi mmekọrịta ha na ndị obodo ga-eme ka nchekwa anụ ọhịa na mmepe njegharị gaa nke ọma site na ịkekọrịta uru dị n'etiti ndị obodo na gọọmentị Tanzania.
Nkesa nke erite ndi njem nleta n’etiti obodo na ndi oru nche-kwa n’okpuru ochichi Tanzanian mere udo na nkweko n’etiti ndi mmadu na anumanu, nke mere ka ndi bi n’ime ha buru ndi nche na ndi nche nke okike.
Na-abụghị Ngorongoro Conservation Conservation, anụ ọhịa ka bụ isi ihe na-eduga ndị njem nleta na isi iyi ndị njem njem na Africa nwere nnukwu mkpa maka nchekwa na nchekwa.
Na kwanye ugwu di uku banyere oke ohia na Afrika, oru polar na mmekorita ya Ndị njem nlegharị anya nke Africa (ATB) na ndokwa iji chee Ihe ngosi nlegharị anya nke Africa Usoro-2 site na nzukọ mbugharị ya na ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya asatọ sitere na mba Africa asatọ iji kpaa maka mbọ a na-agba maka ịchụ nta na njem nlegharị anya Africa